Ngisilungisa kanjani isikrini se-PC yami sikhulu kakhulu? - LifeBytes | I-LifeBytes
Ngisilungisa kanjani isikrini se-PC yami sikhulu kakhulu? Lona umbuzo ocelwe kakhulu. Kodwa ngokuyisisekelo kuyinkinga ye ukulungiswa kwesikrini, lapho izithonjana namawindi kufayela le- pc zivele zikhulu ngokwengeziwe futhi zeqe usayizi we Ukuqapha kungenzeka ukuzinciphisa bese uzibeka ngosayizi wazo ojwayelekile.
Ukuxazulula le nkinga kulula kakhulu, vele ushintshe i- ukulungiswa kwesikrini, singakusho kanjena: inani lesinqumo sesikrini ngokulingana ngokulingana nosayizi wezithombe ku Ukuqapha, ngamanye amazwi, amanani aphakeme kakhulu ekuxazululeni i- isikrini izithombe zizobukeka zincane. Ukuziguqula kanjani kuzoya nge Isistimu yokusebenza isetshenziswa.
1 Izinyathelo okufanele zilandelwe ukulungisa ukulungiswa kwesikrini ku-Windows 7
1.1 Ungashintsha futhi usayizi wezimpawu zedeskithophu
2 Inqubo ku-Mac
Izinyathelo okufanele zilandelwe ukulungisa ukulungiswa kwesikrini ku-Windows 7
Cindezela inkinobho yesokudla endaweni engamboziwe yedeskithophu ye-pc. Khetha "Izakhiwo".
Iya ekuphrintweni kabusha "Ukusetha", cindezela isitatimende "Khombisa izakhiwo".
Slayida isilawuli kusitatimende se- "Screen resolution" kwesokudla. Njengoba sishilo, ukuphakama kwesinqumo, kuncane nosayizi wezithonjana.
Cindezela «Faka isicelo»Uma ukhetha isilungiselelo sokulungiswa okusha.
Unenketho yokubuka isikrini. Ungaqinisekisa ukwamukelwa kwakho ngokucindezela "Yebo" ebhokisini elincane kwathiwa "Ukuqapha ukusetha”Bese ucindezela "Ukwamukela". Lo msebenzi ungenziwa inani lezikhathi ozifunayo.
Ungashintsha futhi usayizi wezimpawu zedeskithophu
Kufanele ufake ideskithophu yekhompyutha yakho.
Qhafaza kwesokudla kwideskithophu
Ukhetha okuthi "Buka" bese ukhetha usayizi wesithonjana owuthandayo
Endabeni yama-computer Mac ukulungiswa kwesikrini kulawula inani lemininingwane elingakhonjiswa ngasikhathi sinye kuqapha. Umgomo ofanayo usebenza njengaku- pc basebenzisani Windows uma isixazululo siphezulu, kuzobonakala izakhi ezincane kufayela le- isikrini futhi umphumela ophikisanayo uzokhiqizwa lapho kusetshenziswa ukuncishiswa kunani elishiwoyo.
Vele kuzoncika ekutheni ngubani osebenzisa i- ikhompyuthaKuyindaba yokuncamelayo, ukuthi ubani onokukhubazeka okubonakalayo angathanda ukusebenza ngezinto ezinkudlwana ngezinhloso zokubukeka okungabonakali kangako futhi ngaleyo ndlela akwazi ukuzibona kangcono. ISerie Mac OS inokulawula kwe- isinqumo eyakhelwe ngaphakathi ukuze ukulungiswa kwesikrini kungashintshwa ngokushesha okukhulu.
Inqubo yamakhompyutha we-Mac imi kanje, igxathu negxathu:
Khetha ilogo ye-Apple etholakala ngaphezulu kwesokunxele kwesikrini.
Chofoza esitatimendeni "Okuncamelayo kwesistimu", bese ukhetha "Izikrini".
Chofoza esitatimendeni "Isikrini" uma ingakakhethwa.
Khetha okukodwa isinqumo zazo ezikhona ohlwini lwe izinqumo kusuka ohlwini lwe izinqumo amathuluzi. Siyazi ukuthi isisombululo sesikrini esisetshenziswa kakhulu yi 1280 x 1024 ngokukhonjiswa okumisiwe kanye 1280 x 800 kubhekiswe ku izikrini uhlobo lwe-panoramic. Kumakhompyutha I-Mac OS X ukumiswa okusha kusebenza ngokushesha.
Indlela ephelele ye-athikili: LifeBytes » Amanethiwekhi » Ungasilungisa kanjani isikrini sami se-pc sikhulu kakhulu?
Uyilungisa kanjani iselula emanzi
Bona Konke Mayelana Nenkululekopop EMexico